पुरुषले महिलाको स्त”न दिनमा १० मिनेट हेरे, आयु बढ्ने वैज्ञानिकको दावी ! • raradiodarpan.com
पुरुषले महिलाको स्त”न दिनमा १० मिनेट हेरे, आयु बढ्ने वैज्ञानिकको दावी !
हाम्रो समाजमा महिलाहरुलाई घूरनुलाई एक अ’पराधको श्रेणीमा रााखिएको छ । जबकि त्यसको ठीक उल्टो प्रतिदिन महिलाहरुलाई १० मिनेट सम्म घूरी रहनु पुरुषहरुका निम्ति स्वास्थ्यवर्धक हुन्छ भन्ने न्यू ईङ्गल्याण्ड जर्नल अफ मेडिसिनमा प्रकाशित एक सर्वेक्षणले देखाएको छ । पुरुष यदि दिनहुँ १० मिनेट सम्म महिलाहरुको स्तनलाई घूरेर हेरिरह्यो भने
उनिहरुमा केवल हृदयघातको संभावना कम रहन्छ बल्कि उनिहरुको आयुपनि बढ्छ । डाक्टरहरुका अनुसार उन्नत वक्ष भएका महिलाहरुलाई प्रतिदिन १० मिनेट सम्म घूरेर हेर्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ । वैज्ञानिकहरुको त यस्तोसम्म भनाई रहेको छ कि ठूलाठूला स्तन भएका महिलाहरुलाई घूरेर हेर्नेहो भने पुरुषहरुको उमेर बढछ ।
सर्वेक्षणको निष्कर्ष छ केहि मिनेट महिलाहरुको स्तनहरुलाई नियाली रहने हो भने स्वास्थ्यका निम्ति जिम जानु भन्दा राम्रो हुन्छ । एजिंगका एक विशेषज्ञ डाक्टरका भनाईमा सुसंगठित महिलालाई मात्र दश मिनेटसम्म हेर्ने हो भनेपनि यतिधेरै उर्जा खर्च हुन्छ जति उर्जा ३० मिनेट एयराबिक्स व्यायाममा खर्च हुन्छ ।
यस विलक्षण खोजको परिणामहरुलाई सार्वजनिक गर्नुभन्दा पहिले यस खोजी दलले ५ वर्ष व्यतित गरेको थियो । जो व्यक्तिहरुलाई प्रतिदिन महिलाहरुको स्तन हेर्न भनिएको थियो उनिहरुको अन्य व्यक्तिहरुको भन्दा रक्तचाप कम थियो । यस्ता व्यक्तिहरुको रेस्टिङ पल्स दरपनि ढिला थियो र उनिहरुको कोरोनरी आर्टरीको विमारीको खतरा पनि कम भएको थियो ।
डाक्टरहरुका अनुसार यौन उत्साहबाट हृदयको पम्पिङ गतिपनि तेज हुन्छ र यसले रक्त सन्चारमा पनि सुधार हुन्छ । यस्तो पनि मानिएको छ कि सामान्यतया पुरुषहरुको दृष्टि अन्य अंगहरु भन्दा महिलाहरुको स्तनमा धेरै समय सम्म अडिन्छ ।